Welcome to Aayaha Nolosha » GABAR SOOMAALI AH OO HAL SABAB U BARATAY SIDA BAARASHUUDKA LOOGU SOO BOODO.
GABAR SOOMAALI AH OO HAL SABAB U BARATAY SIDA BAARASHUUDKA LOOGU SOO BOODO.
March 14, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Mayran Cumar waa gabar Soomaaliyeed ee dagan Minneapolis Minnesota ayaa dhawaan baratay sida baarashuudka looga soo boodo horeyna waxay u baratay wadida diyaaradaha yaryar.
Marka ay ka hadlleysay waxyaabaha ku dhaliyay in ay barato sida diyaaradda loo kaxeeyo ayay tiri ”Waxaan u safray wadanka sucuudiga oo aan arkay sida loo cadadiyo dumarka looma ogola in ay gaari kaxeeyaan anigu waxaan haystay liisanka gaadhiga markii aan soo noqday Ayaan go’aansaday in aan gabdhaha muslimiinta tuso in aan wadi karo diyaarad.
Nooca diyaaradda ay baratay ayaa ah nooca loo yaqaanno hal-matoorleyda waxayna hadda ku hanweyn tahay in ay barato midda rakaabka.
”Barashada baarashuudka waxaa igu dhaliyay habeen annigoo daawanaya barnaamij ayaa arkay nin isaga oo raba in uu badbaadiyo rakaab la dhintay, niyada ayaan iska tusay in ay fiican tahay in qof walba uu barto sida loogu duulo baarashuudka, markii u horeysay ee aan tago Meesha barashada baarashuudka waxaan la kulmay caqabado, inta aan booday barashada laba mar waa lagula boodayaa, mar sadexaad-na laba qof ayaa geesaha kaa qabaneysa oo arkeysa sida aad u soo deganeysid.
Sidee ugu suurtagashay markeedi ugu horreysay? Baarashuudka maalinkii u horeysay waxaan ka raadiyay Minneapolis wada rag ayay ahaayeen,markii danbe gabadh ayaa ii sheegtay in Luska,san aan ka helayo laba gabdhood hadii ay jaanis leeyihiin, waan wacay gabadhii kaligay ayaan u socdaalay goobtaas.
”Waxaan tagey aniga oo xijaaban goobta waxaa joogay dhalinyaro waxey dareemeen cabsi,waxan la kulmay dareen diidmo ah,markii danbe aniga ayaa tagay miiska qaabilada waan u sheegay in aan leeyahay balan, waxey I weydiiyeen adiga miyaa doonaya mise ninka kula socda oo ahaa qob magac carab ah u qornaa,waxaan la soo baxay liisankii duuliyaha aan sidatay waxaana isbadalay dareenkoodii, qofwalba wuxuu codsadey innuu macalin ii noqdo waxaan codsadey gabadhii aan doonayay in ay macalin ii noqoto.
Kaddib maxaa dhacay? ”Markii aan diyaaraddii kornay waxaa lagashadaa okiyaale iyo mid kale oo lamid ah ka loo qaato wadista mootooyinka, kaas waan hilmaamay diyaaradii ayaan kornay.
”Goobta laga soo boodayaa waa 11 fiit oo hawada ah u dhiganta jooga bada kun ilaa kun iyo boqol, markii aan soo boodnay hawadii way iga dhuntay balse gabadhii ayaa i caawisay markii ay dareentay waxay furtay baarashuudkii, dareenkayga ayay i weydiiyeen markii aan soo dagnay, Soomaali ayaan ahay waan is adkeeyey si aan u tuso wax walba waa inuu okey yahay.
”Waxaan doonayaa barashada diyaaradaha ganacsiga, waxaa iga hortaagan kharasha oo dhan 100 kun oo doolar aniguna ma awoodo, ninkan ayaa ahaa nin caqli madan laba arimood ayuu ii soo jeediyay ta koowaad in jaaliyadu hada soomaalidu ay ku kaalmeeyaan ama ay dawlada soomaliya soo codsato iskuulkan.